Izindaba - Umshini wokuwasha osongwayo
Sawubona, nonke.Lona nguMelody waseShanghai.Ngisebenze enkampanini yamazwe ngamazwe yaseVoshon iminyaka engaphezu kwengu-7 eyisikhombisa.Inkampani yamazwe ngamazwe iVoshon iyingxenye yohwebo lwangaphandle ye-Haijia Group, ephethe ukuthengiswa phesheya kwemikhiqizo ye-Haijia futhi iyona kuphela inkampani egunyaziwe ye-Haijia Brand.Sigxila kukho konke ukumaketha kwenethiwekhi.
Manje ake ngenze isethulo esihle se-fty HAIJIA GROUP yethu.
I-Haijia Group yasungulwa ngo-1989, osekuyiminyaka engaphezu kwengu-30 isemsebenzini wezinto zikagesi zasendlini inamandla okukhiqiza aqinile kanye nekhono lokucwaninga nentuthuko. Ithimba lokucwaninga nokuthuthukisa umkhiqizo liholwa izisebenzi eziphezulu ezike zasebenza njengenduna yesigaba. U-Toshiba kanye nomphathi we-IE we-Whirlpool.Uchungechunge lwemikhiqizo yethu eyinhloko yimishini yokuwasha ephathwayo emincane kanye nesiqandisi se-skincare.Sizothuthukisa imikhiqizo emisha ye-e-commerce unyaka nonyaka futhi siqhubeke nokusungulela abantu abavela kuwo wonke umhlaba.Sisebenzisane nenkampani yakwaMidea kanye neMi okuwuphawu oludume kakhulu eChina.Uke wezwa ngalezi zinhlobo ezimbili?
Sinezitayela ezi-2 zakamuva ezikhishwe zomshini wokuwasha ophathwayo oshisayo oshisayo.
Olunye uhlobo oluyisisekelo, ukuhlala emakethe.
Enye inguqulo yokuthuthukisa yesizukulwane sesibili ngobhasikidi abadonsa amanzi.Sithuthukisa injini ibe yijubane eliphezulu nesetshenziswa nasemotweni.Ijubane lingafinyelela ku-550 ngomzuzu ngamunye, kanti futhi kukhona amabhola amabili wesibani se-UV ngaphansi kwesitsha, angabulala amagciwane angama-99.99%.
Uma unombono womklamo pls zizwe ukhululekile ukuxhumana nami.Singathanda ukusiza abantu bathuthukise imikhiqizo elandela ithrendi emakethe.
Ngilinde wena lapha noma kunini!!!